Cutubyo ka socda ciidamada AMISOM oo la geeyay magaalada Cadaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCutubyo ka socda ciidamada AMISOM oo la geeyay magaalada Cadaado
October 23, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM). [Sawirka: Sonna]
Cadaado-(Puntland Mirror) Cutubyo kamid ah ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika (AMISOM) ayaa gaaray magaalada Cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Galmudug, sida ay tebisay wakaalada wararka dowlada federaalka Soomaaliya ee Muqdisho.
Sida ilo-wareedyo ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror ciidamada ayaa lagu qiyaasayaa ilaa dhowr boqol kuwaasoo kasoo jeeda dalalka Jabuuti iyo Burundi oo qayb ka ah howlgalka AMISOM.
Bayaan kasoo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamadaas halkaas loo geeyay si ay u ilaaliyaan inta lagu guda jiro doorashooyinka soo xulida baarlamaanka Soomaaliya.
Si kastoo ay ahaataba, imaanshaha ciidamada AMISOM ee magaalada Cadaado ayaa sii kordhin karta xiisada u dhaxaysa Galmudug iyo Puntland, kuwaasoo dagaalo ku dhexmareen magaalada Gaalkacyo asbuucyadii lasoo dhaafay.
Horey, dowlada Puntland ayaa ugu eedaysay dowlada federaalka Soomaaliya in ay hurinayso xiisada gobolka Mudug, Puntland ayaa sheegtay in ay qabatay dhowr kamid ah ciidamada sirdoonka Soomaaliya ee NISA kuwaasoo loo soo diray in ay ka bar-bar dagaalamaan maleeshiyada Galmudug ee kasoo horjeeda ciidamada Puntland.